Mabhuku akanakisa munhoroondo | Zvazvino Zvinyorwa
Kana zvasvika pakusarudza akanakisa mabhuku, pfungwa dzinogona kuve dzakawanda. Nechikonzero ichocho, isu takanamatira kune edu maitiro maitiro atove mazita senge Raibhurari yepasi rose, rakanyorwa nevanyori zana vanobva kunyika makumi mashanu nemashanu pakasvika kutsvaga mabhuku gumi akanakisa munhoroondo. Mabasa ayo atove chikamu chenyika yetsamba nekusingaperi.
1 Makore Mazana Ekusurukirwa, rakanyorwa naGabriel García Márquez
2 Kuzvikudza uye Kusarura, naJane Austen
3 Zvese zvinowira pasi, naChinua Achebe
4 1984, naGeorge Orwell
5 Don Quixote de la Mancha, naMiguel de Cervantes
6 Hondo uye Runyararo, naLeon Tolstoy
7 Iliad, naHomer
8 Ulysses, naJames Joyce
9 Kutsvaga kwakarasika nguva, naMarcel Proust
10 Husiku hweArabia
Latin Latin tsamba dzakatipa dzimwe mabhuku akanakisa ezana ramakore rechiXNUMX, ichiputika mumarudzi evara, kuomarara uye kwechokwadi kwemashiripiti ane mumiriri mukuru, pasina mubvunzo, Colombian Gabriel García Márquez. Mushure mekuburitswa muna 1967, Makore Mazana Ekusurukirwa, iyo Nobel Prize's magnum opus, yakave budiriro nekuda kwekurapwa kwenhoroondo veBuendía, mhuri inopfuura zvizvarwa zvinoverengeka inochinja Macondo, taundi rakarasika pakati penzvimbo dzinopisa dzeSouth America maigara dimikira rine simba kwazvo nezve nhoroondo yemazuva ano yekondinendi yose.
Iwe hausati waverenga Makore zana okusurukirwa?
Mushure memazana emakore ekuramba vanyori vechikadzi, mukadzi wechiChirungu Austen akaziva kuburitsa zvese zvitsotsi zvakaunganidzwa mune ino novel yakaburitswa muna 1813. ekutanga erudo ma comedies munhoroondo yezvinyorwa, Kuzvikudza uye kufungira zvisizvo inotenderera muchinyakare mumabasa aAusten: Hondo yevakomana mumaruwa Chirungu, mune iyi nyaya pakati paElizabeth Bennet nemafungiro ake pamusoro paFitzwilliam Darcy, murume wevakuru vepamusoro uyo anomutonga nechinzvimbo chake cheMagariro.
Zvese zvinowira pasi, naChinua Achebe
La african zvinyorwa yakatambura kwemakore kudzvinyirirwa kweEuropean colonization iyo yakamisikidza tsika dzayo, chinamato chayo uye zvinyorwa zvayo zvekunyora pane kubvumira vanhu venyika hombe yepasi kuti vataure. Ichokwadi chinoratidzwa senge dzimwe shoma nguva mu Zvese zvinowira pasi, bhuku rinozivikanwa kwazvo nemubati weNobel akazvarwa muNigerian, Chinua Achebe. Nyaya yatinopupurira kudzikira kwemhare yeAfrica ine simba mushure mekuuya kwevaparidzi veChirungu muAfrica, vachigadzira nyaya yekushushikana mu crescendo.
Mune nhoroondo yezvinyorwa pakave nenyaya dzakawanda dzekuona, asi vashoma vanokwanisa kubata kutya kwekutyaira sezvakaitwa 1984, basa raGeorge Orwell. Yakabudiswa muna 1949, inoverengeka yakasimbisa hutongi hwezvematongerwo enyika hweiyo "ziso rinoona rese," iro Mukoma izvo zvinomanikidza rusununguko rwese uye kutaura. Yakagara mune ramangwana renyika, kunyanya mune inozivikanwa Air Strip 1, inozivikanwa seyakare England, 1984 yaitengesa zvakanyanya panguva muzana ramakumi maviri apo nyika yese yaive ichingofunga mhedzisiro yekuwedzeredza kwayo.
Ungada here kuverenga 1984 naGeorge Orwell?
Mutsamba yambotaurwa yeWorld Library, Don Quixote de la Mancha akaparadzaniswa nevamwe vese kuti vaonekwe sa «basa gurusa rakambonyorwa«. Mumwe muenzaniso, pakati pevamwe vazhinji, izvo zvinotsigira simba rekuti basa raMiguel de Cervantes pamunhu ane mukurumbira akarwisa magiramu ekumhepo aakatora kuti hofori anga ave naro kubva parakaburitswa muna 1605.
Don Quijote weLa Mancha unofanirwa kuiverenga kamwe muhupenyu hwako.
Hondo uye Runyararo, naLeon Tolstoy
Rakaburitswa mumafascicles kubva muna 1865 kusvika parakaburitswa muna 1869, Guerra y paz inoonekwa kwete seimwe ye iwo akanakisa mabhuku munhoroondo yezvinyorwa zveRussia, asiwo zveyese. Mumutambo, Tolstoy anoongorora mavara akasiyana kuburikidza nemakore zana apfuura enhoroondo yeRussia, achinyanya kusimbisa basa raNapoleon kuburikidza nemeso emhuri ina mukutanga kwezana ramakore rechi100.
Izvo zvinofungidzirwa se iro basa rekare kudarika kumadokero kwenyikaIliad idetembo rine mukurumbira, hunhu hwake, Achilles, mwanakomana waMambo Peleus naNereid Thetis, akatsamwa naAgamemnon, mutungamiri wechiGreek uyo anobvuta mudiwa wake Briseis kwaari. Inoumbwa nendima 15.693 dzakakamurwa kuva nziyo makumi maviri nemana nevazivi vechiGreek vakashandisa iyi epiki nekuda kwezvinangwa zvekudzidzisa muGrisi Yakare, Iyo Iliad inyanzvi yepasi rose yezvinyorwa pamwe ne Odyssey, zvakare naHomer, Chronicle yerwendo runonakidza rweUlysses kuenda kuIthaca.
Iye wekuIrish Joyce akachinja ngano yegamba reGreek kubva kuOdyssey kuti ive izvo zvinofungidzirwa nevazhinji kuva iyo yakanakisa nhoroondo mune echirungu zvinyorwa zvachose. Inotungamirwa nekuongororwa kwakawanda uye hurukuro nenyanzvi, Ulysses anorondedzera nzira kuburikidza nemigwagwa yeDublin yeLeopold Bloom naStepehn Dedalus, ese ari maviri anoonekwa se chinja egos kubva kuna Joyce iye. Chinhu chezvemamiriro ezvinhu umo kukura nihilism kunotsanangura chizvarwa uye vane mavara nezviratidzo zvine zvakawanda zvakafanana nebasa rakakurumbira reGreek iro rinokwereta zita remuratidziri waro.
Ungada here kuverenga Ulysses naJames Joyce?
Kutsvaga kwakarasika nguva, naMarcel Proust
Chimwe chehunyanzvi hwemabhuku echiFrench chakakamurwa kuita mavhoriyamu manomwe akaburitswa pakati pa1913 na1927 kutitaurira nyaya yaMarcel, murume wechidiki anobva kuFrance aristocracy uyo, kunyangwe aishuvira kuve munyori, anotorwa nerudo, bonde uye kuzvida -kuwana. Kutsvaga zvakapfuura kuburikidza nezwi remukati remunyori senge monologue inoratidza basa rakaomarara iro richapinda munhoroondo nekuda kwebasa rakanaka raProust, akafa panguva iyo mavhoriyamu matatu ekupedzisira paakadhindwa, uye ndeimwe nyaya dzekutanga mumabhuku dzakatanga kugadzirisa nyaya yeungochani.
Lee Mukutsvaga Nguva Yakarasika.
Tinogona kusarudza mabhuku mazhinji kubva kumadokero zvinyorwa, asi mushure mezvose, rondedzero inokurudzirwa nemazhinji nuances zvinoenderana nenzvimbo dzakasiyana dzepasi dzakadudzira nzira yekuzviudza nyaya pachavo. Uye mumwe wemuenzaniso wakanaka kwazvo weichi chokwadi kwaive kusvika kwe Husiku hweArabia kusvika muzana ramakore rechiXNUMX Europe uyo akanyengerwa nenyaya dzeScheherazade, murume wedare uyo aifanira kugutsa Sultan manheru ega ega nenyaya dzake kana aisada kurasikirwa nepfungwa. Dutu rejecha rizere nenyaya dzemarambi emashiripiti, zviwi zvinoyangarara uye mabhawa asinganzwisisike anounganidza hunhu hwenyika dzakaita seIndia, Persia kana Egypt.
Ndeapi mabhuku akanakisa munhoroondo iwe?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku akanakisa
Matambudziko ekuverenga munyika yekuteerera.
58 Kurume naJo Nesbø. Zvimedu zvezvinyorwa zvake uye bhuku idzva muna Kubvumbi